Ukuzwela Ukuthi Ithikithi Lakho Liyimpilo Yobuciko - Edwin Van Der Hoeven
umhlaba, ukuqwashisa, indalo, ubukhulu besithathu, HSP, ukuqonda, ukukhetha, ukuzwela
~ Ukuzwela kwethu kuyindlela yokuthola amaza nobukhulu obuphakeme bokuqonda nokuphila. Uhlelela kuphi? Ukuphakama kokuqonda kwethu, lapho sikwazi ngokwengeziwe ukuhlela izimpilo zethu. Ngale ndlela ungasebenzisa ukuzwela kwakho ukuze uphile impilo enhle neyakhayo. ~
Ngesinye isikhathi ngesikhathi sokuzindla okukhethekile ngathola isithombe sokuthi ubukhulu, amaza kanye nokuzwela kwethu kusebenza kanjani njengomuntu. Umhlaba ubonakala njengobukhulu bokuqala nezilwane ezahlukahlukene ezihlala phezu kwazo eqenjini lokwazi njengelesibili. Izilwane ezihlakaniphile, kufaka phakathi abantu, zihlala endaweni ebizwa ngokuthi ubukhulu besithathu. Kepha akupheli lapha! Lapho kukhuphuka ubukhulu, kukhuphuka imvamisa futhi sizwela kakhulu kudingeka sikubone. Umhlaba wethu esiphila kuwo ubonwa njengemvamisa ephansi. Cabanga ngemibala: asinakubona infrared ne-ultraviolet, kepha siyati kutsi akhona!
Ubukhulu obuphakeme; bona ukudlidliza okuphezulu
Ubukhulu obulandelayo, obesine, ubukhulu lapho sikhuluma khona, phakathi kwezinye izinto, ngomhlaba kamoya. Ubukhulu bomphefumulo wethu - umzimba wethu we-etheric - lapho kuhlala khona nabathandekayo bethu abangasekho. Lapho singena kule mvamisa ephakeme siyakwazi ukuxhumana nalo mhlaba, kepha futhi singawabona amandla alabo abasizungezile. Lokhu sikubiza ngokuthi yi-clairvoyance, ukuzwa okucacile nokuzizwa. Lokhu sikwenza ngokukhuphula ukudlidlizela kwethu uqobo, kepha singakwazi nokudlula lesi silinganiso sesi-4. Kepha yini ekufanele, futhi ungakucabanga kanjani lokhu manje?
Isibonelo sendlela imizwa ephakeme isebenza ngayo
Ngithanda ukusebenzisa isibonelo ukuchaza ukuthi kwenzeka kanjani lokhu. Umculo! Ngiyawuthanda umculo futhi nabaqondisi bami ngiwusebenzisa kakhulu ukwenza izinto zicace kimi. Kufanele ngabe sonke siye ekhonsathini noma emkhosini. Zicabange usesimweni sokupaka izimoto zomkhosi, uzwa izingqondo ezingacacile futhi eziphansi kakhulu zomculo. Uyemukelwa, usufikile kulesipiliyoni sobukhulu besithathu sempilo. Impilo njengoba sibona kwenzeka lapho uzwa la matoni angacacisiwe, kanti uyazi ukuthi iqembu lidlala amamitha ambalwa.
Umuzwa ophakeme unamazinga amaningi
Upake imoto yakho futhi okwamanje uqonde kusayithi lomkhosi. Uqala ukuzwa incazelo ethe xaxa emsindweni, okwamanje uzwa nokuthi hlobo luphi lomculo, noma lusekude kakhulu. Ukhuphule ukugxila kwakho nokuzwa kwakho. Usakuzwa okuzwile phambilini, kepha manje usenezele eminye imininingwane. Uyemukelwa kwisipiliyoni esisha sokuzwela, usuhlangane nobukhulu obuphakeme.
Ukuzwela kwethu kusisiza ukuba sikhombe ukuthi singobani ngempela
Sihamba siqonde esigangeni sibheke esiteji futhi njengoba sisondela esigabeni umculo uya ngokuya uzwakala kakhulu. Sidlula ebangeni lesihlanu, lesithupha neliphezulu. Futhi njengoba sisondela esiteji, singabona ngisho nebhendi nokubonakala kothando kwamalungu ayo. Siphakamisa ukuqwashisa kwethu futhi sizwela kakhulu, sisondela kakhulu ebhendi, kunjengokungathi, singumthombo womsindo esihlangabezana nawo. Ukuzwa kwethu kufana nethikithi lapho singasondela khona emthonjeni. Kepha, njengakho konke, ukuzikhethela kwethu ekugcineni kunquma ukuthi sifuna ukusondela kangakanani esiteji. Uyayisebenzisa imizwa yakho noma cha?
Ukuzwela kwethu njengendlela yokuveza imibono yethu
Ungaba nenhlanhla. Ake sithi uzwela kakhulu ukuthi unethikithi lokubuyela emuva, ungena esiteji bese ngokungazelelwe ume nge-microphone phambi kwakho. Yithuba lakho, usuyingxenye yebhendi. Manje usungakwazi ukwenza ingoma yakho yempilo kwizithameli eziyizigidi, ezifisela ukukhanyiselwa. Lapho siphakamisa ukuqwashisa kwethu futhi siqaphele ngokuphelele, ukuzwela kwethu kuyimoto yokuguqula izimpilo zethu kanye nezimpilo zabanye abaningi.
Yiba ngumthombo wokuphila uqobo
Kepha uyazi, imfihlo yangempela ukuthi akudingeki ube nenhlanhla nakancane. Kuhlobene nesinqumo sakho, inhloso yakho yokuthanda ngaphandle kwemibandela. Zazi ukuthi ungubani futhi uzamukele ukuthi ungubani. Kukhetho lwakho ukuma endaweni yokupaka futhi ucule iculo lapho. Kuhle, kepha ufinyelela kubantu abangaki ngalokho? Noma ungena esixukwini ubuke ingoma yakho oyithandayo? Ukukhahlela kwangempela? Ngena kuleso sigaba ngokwakho bese udlala eyakho ingoma. Sonke isinyathelo esiseduze komthombo, wonke umkhawulo owudlulisela endleleni eya emthonjeni womsindo uzofiphala njengoba uhlangabezana nesici esisha ngasinye.
Bamba uzwela lwakho bese udala
Ingabe unesibindi sokubheka ngalapha kwempumulo yakho, uyalokotha ukwamukele ukuthi kunokwengeziwe emva kwale mpilo? Ngalesi sikhathi sokuphila? Ngemuva kwalokho kunothisa impilo yakho ngaphezu kwalokho ongafisa ukukuphupha. Kepha uma ufisa ukwenza okungaphezu kwalokho, yeka konke ungene ngeculo lakho, impilo yakho. Kungaleso sikhathi kuphela lapho ingoma yakho yempilo izothola khona ukukhalipha okugcwele okufanele. Bamba uzwela lwakho! Kuyithikithi lakho ukubumba impilo yakho ngokwakho. Wakha impilo yakho, kuphela ongayilingisa ngangokunokwenzeka! Ngakho-ke, ake sijabule, sicule futhi udanse! Unempilo yakho uqobo ezandleni zakho!
OkwangaphambiliniNgaphambiliniFika lapho uya khona ukuzwela kwakho
Umbono ozwelayo ophezulu
Abantu abangama-20% bazwela kakhulu ... mhlawumbe nawe.
Uzwa izinto kahle kakhulu futhi uyaqaphela ukuthi usabela ngendlela ehlukile ezimweni kunabantu abaningi. Emsebenzini noma ebudlelwaneni kwesinye isikhathi ungaqondakali njengoMuntu Ozwela Kakhulu. Kepha kuqala ngawe. Ngabe usuvele uqonda ukuthi kusho ukuthini ukuzwela kakhulu futhi ungakuboni lokhu njengomthwalo kodwa njengamandla? Ngingajabula ukukusiza.